Rugby à XV vehivavy: hiady ny tapakila hiatrehana ny «Mondial 2021» ny Makis - ewa.mg
News - Rugby à XV vehivavy: hiady ny tapakila hiatrehana ny «Mondial 2021» ny Makis
Fanamby goavana no miandry ny Makis vehivavy, amin’ity. Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny rugby lalaovina olona 15 mantsy izy ireo. Fihaonana, hiadian-toerana, ho an’ny “Mondial 2021”.
Hotanterahina atsy Johannesbourg, Afrika Atsimo, ny 7 – 18 aogositra ho avy izao, ny dingana famaranana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny rugby lalaovina olona 15, sokajy vehivavy. Hanana ny lanjany, izany fihaonana izany satria hiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Mondial 2021”, tanterahina any Nouvelle-Zelande.
Firenena efatra no hiady izany amin’ity dia i Afrika Atsimo, mpampiantrano, Oganda, Kenya ary ny Makis de Madagascar. Mifandimby mihaona ny rehetra ka izay ekipa be isa indrindra no ho tompondaka ary hisolotena an’i Afrika, any amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany.
Raha ny fandaharam-potoana, hidona amin’ny Makis voalohany, ry zareo Kenianina. Lalao hotontosaina, ny 10 aogositra. Fihaonana faharoa, hikatrohana amin’i Afrika atsimo, ny 13 aogositra ary amin-dry zareo, Ogandà ny 16 aogositra. Manana herijika tsara handrombahana ny toerana voalohany, ny Makis, araka ny nambaran-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby. Na izany aza, nomarihiny fa ry zareo Kenianina no heverina fa ho mafy ary tsy maintsy dinganina.
Raha toa kosa ka ny laharana faharoa, no misy ny Makis dia hiatrika ny “repechage”, amin’ireo kaontinanta dimy hafa. Hatreto, mbola mpilalao 36 no manaraka fanazarantena miaraka. Ny faran’ity volana jolay ity kosa vao hivoaka ny anaran’ireo 26 handrafitra ny Makis, ho atsy Afrika Atsimo.
L’article Rugby à XV vehivavy: hiady ny tapakila hiatrehana ny «Mondial 2021» ny Makis a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 22/07/2019
Pilo kely #4473 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4473 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Famahana olana ho an’Atsimondrano – Cirdoma : « Vita telo minitra ny fanamarinana ny fananan-tany »
Niverina nisokatra na­nomboka ny alakamisy 30 jolay 2020 teo ny fari-piadidiana ny fananan-tany (Cir­doma), eny Atsimondrano rehefa nikatona noho ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny firenena. Anisan’ny mampiavaka ny eny an-toerana sady ni­santarana ny fomba fiasa ny fananany fitaovana, ilay «Guichet automatique» na milina famoahana «Taratasy fanamarinana fananan-tany» sy ny «sari-tany» anaty fo­toana fohy sy tsy ilana fikirakirana antontan-taratasy maro. Tsy sarotra ho an’ny mpanjifa ny manokatra azy, araka ny nambaran’ny lehiben’ny Cirdoma, Atsimon­dra­no, Rakoto Jean René. «Miroso amin’ny atao hoe «dématérialisation» ny sampandraharahan’ny fananan-tany eo anivon’ny minisite­ran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP). Afaka mahazo ny «certificat de situation juridique» na «plan»n-ny tany anatin’ny telo minitra ny mpanjifa raha mangataka izany», hoy izy. Azo eo no ho eo ny taratasy nangatahinaTafiditra amin’ny fanafainganana ny fandraisana ireo olona izany. Nanteriny fa ilaina izany, indrindra amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. «Tsy misy mi­hitsy ny fifampikasohana eo amin’ny mpanjifa sy ny mpiasan’ny fananan-tany», hoy ihany izy. Nanazava ny fomba fiasa ao amin’ny «guichet unique» kosa ny mpikajy ny fananan-tany ao Atsi­mon­drano, i Tsimiava Ro­berte. «Dingana voalohany ny fandoavana vola sy ny fampidirina ao anatin’ny milina ny momba ny tany sy ny mpanjifa. Mahazo marika miafina «code secret» ny mpanjifa, ampidirina ao anatin’ny guichet. Azo eo no ho eo ny antontan-taratasy nangatahina», hoy izy. Fanomezana fahafaham-po ny mpanjifaNotsindriny fa manafaingana ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ity guichet unique ity. Hentitra kosa anefa ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana, hiarovana sy hisorohana ny fipariahan’ny coronavirus eny amin’ity birao ity.Synèse R.L’article Famahana olana ho an’Atsimondrano – Cirdoma : « Vita telo minitra ny fanamarinana ny fananan-tany » a été récupéré chez Newsmada.
Anisan’ny nanaitra izay nahita azy ity sanganasan’i Avelo-Nidor ity. « Tononkira fananganana ny maty ». Fa iza sa inona ny maty ? Iza no afaka mamelona izany maty izany?Ny manana aina, saika mandalo na mandia ny fahafatesana avokoa ! Ao koa ireo zavatra nisy sy misy ary hisy kanefa mety iharan’ny fahafatesana ihany koa. Ireo rehetra ireo, samy tafiditra ao anatin’ilay teatra poetika arahina dihy nampitondraina ny lohateny « Tononkira fananganana ny maty ». Ny 24 mey izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, ny fikambanana Bee Z’Art indray no hilalao azy ity ao amin’ny Ivokolo Cemdlac Analakely.Hoy i Avelo-Nidor raha nanontaniana ny hevitra tiana hampitaina amin’ity teatra poetika ity : « Amin’izao fotoana izao, efa tsy manana toe-tsaina hiombona intsony ny olona. Efa samy manao izay ho afany amin’ny fiainana hany ka lasa manaotao foana ny ankamaroany : misoloky, mamono olona, mametsifetsy ny hafa ary lasa tsy manam-panahy… Io ilay fanahy maha olona hoy isika Malagasy. Noho izany, ny maty atsangana eto dia ilay fanahy maha olona fa tsy vatana nofo sy ra akory… Atsangana amin’ny alalan’ny tononkalo… ».Misy akta 4 ny « Tononkira fananganana ny maty ». Ny akta voalohany miresaka ny tontolon’ny soratra sy ny fiainam-pirenena. Ny akta faharoa sy ny fahatelo ary ny fahefatra miresaka momba ny fitiavana. Tononkalo 40 mahery no mandrafitra ny tantara raha 90 mahery kosa ny mandrafitra azy ireo ho boky.Marihina fa ny fikambanana Bee Z’Art rahateo no mikarakara azy ity. Fikambanana niorina tany amin’ny taona 2016 ahitana sampana 3 : fanentanana sy dihy ary ny mozika izay mbola eo an-dalampikarakarana. « Bee Z’Art: Tantely mizara ny mamy indrindra. Ny « Z » tokana ary ny « Art » zava-kanto. « Bizarre » : miezaka hanao zavakanto miavaka, hafahafa, tsy toy ny mahazatra kanefa kanto… », hoy i Avelo-Nidor.HaRy Razafindrakoto L’article Teatra poetika arahina dihy: lalaovin’ny Bee Z’Art ny « Tononkira fananganana ny maty » a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Andrianainarivelo Hajo : « Tsy hisy ny fanamboaran-dalana tandrametaka…”
Nidina ifotony nijery ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo sy ny manodidina ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, omaly. “Anton’ny fijerena ety tahaka izao ny fandrindrana ny asa miaraka amin’ny teknisiana mba tsy hisy ny tandrametaka fa asa tokony hamaha tanteraka ny olana rehetra… Efa mandeha ny fanamboaran-dalana rehetra amin’izao fotoana izao… Manodidina ny 35% ny asa vita ho an’ny toerana sasany. Tombanana fa ho vita mialohan’ny faran’ny taona avokoa izy rehetra”, hoy izy. Niara-dia tamin’ny minisitra ireo teknisianina eo anivon’ny minisitera sy ireo orinasa misahana ny fanamboaran-dalana. Nambarany fa tsy maintsy atao ny fandrindrana izany mba tsy hiteraka fikorontanana eo amin’ny asa. Efa hiatrika ny fotoam-pahavaratra rahateo isika ka tsy maintsy miomana dieny mialoha hialana amin’ny mety hiakaran’ny rano. Ankoatra izany, niaiky ny minisitra fa misy ihany ny fahasarotana amin’ny fanamboarana ny lalana Antanimena mihazo an’Ankorondrano.Azo ampiasaina amin’ny fahatongavan’ny papa François…Tsy maintsy hafindra ny andrin-jiron’ny Jirama na koa ny taribin’ny orinasam-pifandraisana na koa ireo fotodrafitrasa hafa hokitihina. Eo koa ny fivarinan’ny rano sy ny rano maloto. “Na izany aza, hiezaka ny orinasa mba ho azo ampiasaina amin’ny fandraisana ny papa François izany. Hohatsaraina indray aorian’izany avy eo”, hoy ny minisitra Andrianainarivelo Hajo. Ho azon’ny fiara efatra, roa mandroso sy miverina izany lalana izany.Synèse R. Mirefy 47 km ny lalana amboarina eto Antananarivo sy ny manodidina. Mitsinjara ho efatra izany, ahitana ny RN4 : Gara Soarano-Mahazo sy Andravoahangy Ambony-Sabotsy Namehana. Ny RN4 kosa, Soarano hatreny Imerinafovoany. Miainga eo Soarano mihazo an’i Mandriamena ho an’ny RN7 ary ny RN1 kosa, “Rond-point” Anosy mihazo ny tetezana Ampitatafika ary koa ny lalana Itaosy hatreny amin’ny tetezana Ampasika sy ny Cité Itaosy ary Avarabohitra. L’article Minisitra Andrianainarivelo Hajo : « Tsy hisy ny fanamboaran-dalana tandrametaka…” a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Lalao firahalahiana: betsaka ireo mpilalaon’ny Barea tsy ho avy
Tsy afaka zava-manahirana ny Barea de Madagascar. Taorian’ny fikorontanan’ny lalao firahalahiana, izao indray, betsaka ireo mpilalao tsy ho afaka hamonjy ireo fihaonana roa ho fanomanantena.Raha tsy misy ny fiovana farany, hanomboka amin’ity alatsinainy ity ny fampivondronana sy ny fiofanana ataon’ireo mpilalao, nantsoina handrafitra ny Barea de Madagascar. Raha 23 no nantsoina tany am-boalohany, mihena am-pitoerana toa fen’antitra izany satria maro ireo mpilalao no tsy afaka amin’izany. .Taorian’ny faharatran’i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea, fantatra ihany koa izao fa tsy salama fa voan’ny valanaretina covid 19 i Jerome Mombris, vodilaharana, ka tsy maintsy miatrika fihibohana mandritra ny tapa-bolana. Ankoatra izay, tsy misy ny sidina mampitohy ireo firenena hafa mihazo an’i Eoropa. Anisan’izany ny any Etazonia, ilalaovan’i Romain Metanire sy ireo firenena arabo misy an’i Ibrahim Amada sy i Carolus. Efa nanambara ny tsy fahafahany ihany koa i Dax atsy Afrika Atsimo, raha toa ka hantsoin’i Nicolas Dupuis, noho izay tsy fisian’ny sidina izay.Hatreto anefa, tsy niantso mpilalao hafa intsony hasolo azy dimy mirahalahy ireo ny mpanazatra ny Barea de Madagascar, ankoatra an’i Toavina (Debakely) sy i Bakary Mario, izay natao tao anaty “équipe de reserve”. Mety hiaritra amin’ireo mpilalao 20 ambiny ireo izany sisa i Nicolas Dupuis, amin’ny lalao hifanandrinana amin’ny Swift Hesperange, ny zoma 9 oktobra ho avy izao, ao Luxembourg sy ny amin’ny Etalons-n’i Borkina Faso, ao amin’ny kianja El Jadida Maraoka, ny alatsinainy 12 oktobra 2020.Tsiahivina fa ireo lalao firahalahiana ireo dia tafiditra ao anaty fanomanantenan’ny Barea de Madagascar, amin’ny fihaonana fiadian-toerana ho an’ny Can 2022, hifanandrinana amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, ny 9 novambra ho avy izao ny lalao mandroso, any Abidjan ary ny 17 novambra ny fihaonana miverina, any Toamasina. Tompondaka L’article Kitra – Lalao firahalahiana: betsaka ireo mpilalaon’ny Barea tsy ho avy a été récupéré chez Newsmada.
Asa mamoafady amin’ny “internet”: voasambotra ny lehilahy roa mampiasa vehivavy maro
Tra-tehaky ny polisy tetsy Ampahibe, ny alatsinainy teo, ny lehilahy roa mpanera vehivavy hijangajanga.Araka ny fantatra, mampiasa trano iray eo an-toerana ireo olon-dratsy amin’ny fanaovana ny asa vetaveta. Araka izany, misy ireo vehivavy ampiasain’izy ireo hanao izany. Nambaran’ny Polisim-pirenena fa 21 ka hatramin’ny 24 taona avy ireo vehivavy voakarama. Amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera « facebook » ny ahitan’izy roa lahy ireo vehivavy ireo. Fantatra fa misy ny fianarana ny asa rehefa manaiky hanao ny asa mamoafady ireo vehivavy voasafidy. Manome fafinaretana ireo vahiny amin’ny alalan’ny filalaovana fivaviana ny asa. Eo koa ny fanaovana « streptease » amin’ny alalan’ny tambajotra na ny « internet ». Nisy nahafantatra ireo teti-dratsin’ireo jiolahy ka nilaza izany amin’ny Polisim-pirenena. Taorian’izay, nidina teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanamarina izany ka voasambotra izy roa lahy. Taorian’ny fanadihadiana azy, natolotra ny fitsarana omaly ny raharaha. Henintsoa HaniL’article Asa mamoafady amin’ny “internet”: voasambotra ny lehilahy roa mampiasa vehivavy maro a été récupéré chez Newsmada.
Boriborintany III : nisitraka hazavana ny fokontany 16
Misitraka ny fampandrosoana amin’ny volan’ ny CLD ireo fokontany miisa 34 etsy amin’ny boriborintany faha III. Nahazo jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ireo fokontany miisa 16. Ha­pe­traka amin’ ireo elakela-trano izany. Tanjona ny hampihenana ny asa fanendahana; mahazo vahana amin’ iny faritra iny. “Misy ny CLD 2019, natokana ho an’ ny depiote hitondrana fampandosoana. Laharam-pahamehana ho antsika ny fandriampahalemana. Nahitana vokany izany satria nihena ny tsy filaminana amin’ny faritra sasany efa nanaovana ny tetikasa. Nihai­no ny fitarainan’ny mponina iza­hay ka izao nitondra ny hazavana ho an’ny rehetra izao», hoy ny depiote Anyah. Hitohy amin’ny fanavaozana ireo biraom-pokontany izany mba hanamafisana ny hidin’ ny trano. Eo koa ny fanatsarana ny varavarana, ny vy vaovao sy varavarankely vaovao ho an’ ireo biraom-pokontany miisa sivy. Efa nialohavan’ny fizarana solosaina ho an’ ireo fokontany tsirairay izany, ho an’ny CLD 2018. Nanteriny fa hanaovana tetikasa mifanakaiky hatrany amin’ ny filan’ ny vahoaka izany. “Tsy mitazona ary tsy mitantana io sorabola io izahay fa manolotra ireo tetikasa. Manapaka ny tetikasa tafiditra ao anatin’ io sorabola io kosa ny komity. Tantanana anatin’ny mangarahara izany”, hoy ihany izy. Tsy misy diso anjara amin’ ny asa fampandosoana ireo fo­kontany miisa 34 eny an-toerana.Synèse R.L’article Boriborintany III : nisitraka hazavana ny fokontany 16 a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 23 novembre 2020
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 23 novembre 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 23 novembre 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fiainana antoko: namboly hazo tany Toamasina ny Arema
Nanatanteraka fambolen-kazo fihinamboa “letchis” sy “corossol” miisa arivo ao amin’ny fokontany Tananambo, Fanandrana – Toamasina II, ny antoko Arema ny faran’ny herinandro teo. Tany efa novidian’ny mpanorina mivady io nambolena hazo voalaza io ny taona 1963.Nampahafantarana koa ireo mpikamban’ny “Comité directeur national –CDN”, voafidy nandritra ny kongresy natao teny Ilafy ny marsa 2020, izany. Nahatonga solontena ireo faritany enina sy ireo faritra 22. Noferana ho 200 ihany ny isan’ireo nasaina noho ny fepetra ara-pahasalamana. Narahin’ny fiaraha-misakafo tamin’ny alalan’ny kolontsaina betsimisaraka “Tsaboraha” izany nofonkena mitam-pihavanana izany. Nitohy tamin’ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanatsarana ny endri-piaraha-miasa eo amin’ny samy mpikambana anivon’ny antoko Arema izany.Synèse R.L’article Fiainana antoko: namboly hazo tany Toamasina ny Arema a été récupéré chez Newsmada.
Fampandrosoana eny ifotony: hamondrona ny heriny ny zanak’i Mandrosoa Andramasina
Sambany teo amin’ny tantara. Hifamotoana eny amin’ny Park Sisaony, Ambatofotsy, ny zanaky ny kaominina Mandrosoa Andramasina, ny alahady 29 novambra izao.Nambaran’ireo mpitantana sy mpikarakara izany fa tonga ny fotoana ary ampy izay fotoana maro sy lavabe izay. “Hifankahalala isika rehetra. Hifampihaino koa ny amin’ny tokony hampandrosoana ny tanindrazana iombonana ka hisy ny fakan-kevitra amin’izany hijerena vahaolana satria anisan’ireo kaominina tara raha mitaha amin’ny hafa ny ao an-toerana. Samy nanao teo avokoa ihany ireo nitantana rehetra, saingy voafetra ihany izany noho ny antony maro ka efa fotoany izao ”, hoy izy ireo. Nanterin’ireo mpitarika vonjimaika izao hetsika izao fa mba manana ny vato nasondrotry ny tany, misehatra amin’ny asa samihafa sy manana andraikitra ambony, ny ankamaroan’ny ao Mandrosoa ary mielipatrana hatrany ivelany rehetra any izany. “Antony hamondronana ny hery izany. Ny tsy mahay sobika, mahay fatram-bary”, hoy ihany izy ireo.Olana sedrain’ny any an-toeranaAnisan’ny olana any an-toerana ny haratsian’ny lalana. Eo koa ny fahasahiranan’ny tantsaha eo amin’ny seha-pihariana: fambolena sy fiompiana ary asa tanana… lalam-bola sy lalam-barotra amin’izany. Ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa, toy ny herinaratra…Tsiahivina fa hifamindran-dalana amin’izany fihaonamben izany koa ny hetsika kolontsaina sy fialamboly amin’ny maha mpanan-talenta sy mpahay kanto ny zanaky ny ao Mandrosoa Andramasina. Hibahan-toerana kokoa izany ka hanentanana sy iantsoana ireo zanak’io kaominina io.RandriaL’article Fampandrosoana eny ifotony: hamondrona ny heriny ny zanak’i Mandrosoa Andramasina a été récupéré chez Newsmada.
Nampahafantarin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. Rakotovao Hanitrala Jean Louis, ny alatsinainy teo fa hapetraka ilay « kere data » hahafahana manara-maso ireo olona tena tratran’ny tsy fanjariantsakafo mivaivay any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy.Hanamorana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana azy ireo no tanjona amin’ny fampiasana ity « kere data » ity. Misy ihany koa ny foibe fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana ao Amboasary, izay hisahana ny fanampiana rehetra any atsimo. Anjaran’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny mampandeha izany.Nisaotra ireo Ekipa rehetra nandeha namita iraka tany amin’ireny toerana lavitra ireny ny minisitra ary nambarany, araka izany fa ny fanaovana iraka dia tokony hisy fiantraikany mivantana amin’ny vahoaka hatrany.Fantatra ihany koa izao fa efa hiroso amin’ny fisokafan’ireo toeram-pandidiana manara-penitra manerana ny Nosy ny minisitera. Tsara ny manamarika anefa fa nanomboka ny 19 novambra ka hatramin’ny 09 desambra ho avy izao dia miato mihitsy ny fitokanana zava-bita rehetra noho ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana loholona.Tatiana AL’article Any atsimo: hapetraka ny « kere data » a été récupéré chez Newsmada.
Lutte contre la corruption : Recrutement de magistrats et greffiers pour les PAC Mahajanga et Fianarantsoa
Les antennes du Pôle Anti-Corruption (PAC) à Antananarivo et Mahajanga sont déjà opérationnelles. Afin de renforcer la lutte contre la corruption et les infractions économiques et financières au niveau national, le ministère de la Justice prépare aussi l’ouverture du PAC Fianarantsoa. En effet, un appel à candidatures vient d’être lancé en vue d’étoffer l’équipe du PAC Mahajanga et de rendre effective la mise en place de cette structure au niveau de la région Haute Matsiatra. Le recrutement est ouvert à tous les magistrats de l’ordre judiciaire, mais aussi aux personnels judiciaires issus du corps des greffiers en chef et greffiers. Aussi, en ce qui concerne le PAC Mahajanga, le ministère recrute deux magistrats et deux greffiers pour la juridiction de premier degré siège, un substitut du procureur et deux secrétaires du parquet au premier degré parquet, 2 conseillers et 1 greffier au second degré siège, ainsi qu’un avocat général et un secrétaire du parquet pour la juridiction du second degré du parquet. Pour ce qui est du futur Pôle anti-corruption de Fianarantsoa, Faravohitra annonce le recrutement d’un président et d’un doyen des juges, un juge d’instruction, juge et juge des enfants, 3 juges, un greffier en chef et 6 greffiers pour former la juridiction du premier degré siège. Mais aussi un procureur et deux substituts, un chef de secrétariat du parquet, ainsi que 3 secrétaires du parquet pour composer la juridiction du premier degré parquet. Au niveau de la juridiction de second degré siège, le PAC Fianarantsoa est à la recherche d’un chef de siège, 2 présidents de chambre, 4 conseillers, 1 greffier en chef et 4 greffiers. En revanche, le recrutement d’un chef du ministère public, d’un avocat général, un Substitut général, un chef de secrétariat du parquet et 3 secrétaires du parquet est lancé pour la juridiction du second degré parquet. Une capacité à travailler sous pression, capacité de résistance aux différentes pressions et interventions, une bonne condition physique et une disponibilité pour des déplacements fréquents et une intégrité avérée. Ce sont, entre autres, les critères de sélection exigés pour tous ces postes. Les prétendants sont appelés à déposer leurs dossiers de candidature auprès de la Direction de coordination nationale des Pôles Anti-Corruption au 5e étage de l’immeuble CNAPS aux 67Ha avant le 15 décembre prochain. Davis R L’article Lutte contre la corruption : Recrutement de magistrats et greffiers pour les PAC Mahajanga et Fianarantsoa est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Lutte contre la corruption : Recrutement de magistrats et greffiers pour les PAC Mahajanga et Fianarantsoa a été récupéré chez Midi Madagasikara.